Sunday, January 31, 2016 Admin
Show Traps application for andriod
ထောင်ချောက် (TRAPS) တွေမြင်ရဖို့
Xmode application ကို အသုံးပြုကြရပါတယ်
ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ စက်တွေမှာ xmode app က အလုပ်မလုပ်ပါဘူး
အလုပ်လုပ်ဖို့ လုပ်ရတဲ့ အဆင့်တွေကလည်း တော်တော် ရှုပ်ထွေးပါတယ်
ဒီ show traps application ကတော့
csv ဖိုင် ထည့်တဲ့ နည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်
xmode သုံးလို့မရတဲ့ စက်တွေမှာပါ
ထောင်ချောက် (traps)တွေ မြင်စေဖို့
csv ဖိုင် ပေးတဲ့ ကိုရဲလင်းအောင်ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ
credit to- ရဲလင်းအောင်
ဖိုင်ကိုဒေါင်းပြီး apk install ပါ root assess ပေးပါ csv file install ပြီး reboot လုပ်ပါ။
✨✨✨No Need Xmod ✨✨✨
ကျနော့ အကောင်ထဲမှာ ရှိတဲ့ COC ဆော့တဲ့ အကိုတွေအမတွေဦးဦးတွေ
COC ဆော့တဲ့အခါ အကိုတို့ FindaMatch ဆိုပြီး ဒမြတိုက်ထွက်တဲ့အခါ
အကိုတို့ ဒမြတိုက်မယ့် အိမ်မှာ Trap and Bomb တွေကို အထင်းသား
မြင်နေရမှာပါ။ အခုကျနော် တင်ပေးထားတဲ့ ဖိုင်လေးကို အောက်ပါ
လမ်းကြောင်းအတိုင်းထည့်ပေးပါ။အားတဲ့အခါမှ apk လေးရေးပေးပါ့မယ်..
ဖိုင်ထည့်ရမယ့် လမ်းကြောင်း -
လိုအပ်သော ဖိုင် - https://www.mediafire.com/?kebm4y587x1fxhm
Root Explorer - https://www.mediafire.com/?eq89zx2h2q1icjs
File ကို Permission လုပ်ရန်မလို
Facebook မှာ ဖွက်ထားတဲ့ Log-in Mail တွေကို ဘယ်လို ကြည့်မလဲ ??
Thursday, September 18, 2014 Admin
Facebook မှာ ကိုယ့် သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ Profile ကို ၀င်ကြည့်ဖူးကြတယ်ဟုတ် ?
About ဆိုတဲ့ နေရာမှာ တချို့က ကိုယ့်ရဲ့ G-mail ကို ပြထားတယ်...တချို့က ဖွက်ထားတယ်..
ဖွက်ထားတဲ့ G-mail သိရင်တော့ အဲ့ဒီ့ Account ကို Attack လုပ်ပေ့ါ :3
ပထမဆုံး ကိုယ့်ရဲ့ Facebook Account ကို Log-in ၀င်ထားရပါလိမ့်မယ်..
ပြီးရင်.. www.outlook.com ကိုသွားပါ။။...အကောင့်သစ် တစ်ခုဖွင့်ပါ... Alternate Email နေရာမှာ. ကိုယ့် Facebook Account ရဲ့ Log-in Mail ကို ထည့်ပါ..
အကောင့်ဖွင့် ပြီးသွားရင် ပုံ ၁ က အတိုင်း ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်... မြှားပြထားတဲ့ အတိုင်း ဘယ်ဘက်ထောင့် က Outlook ဆိုတဲ့ ဘေးနားက မြှားကိုနှိပ်ပါ..
Tab လေးခု ပေါ်လာရင် .People ဆိုတဲ့ အနီကွက်လေးကို နှိပ်ပါ.. လောလောဆယ်တော့ Facebook နဲ့ မချိတ်ရသေးတဲ့ အတွက် No Contact လို့ ဘယ်ဘက်မှာ ပြပါလိမ့်မယ်..
မြှားပြထားတဲ့ အတိုင်း.. Facebook Friends ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ... Window တစ်ခု ထပ်ပွင့်သွားပြီး Permissoon တောင်းရင် Connect ကို နိပ်လိုက်ပါ...
Facebook ထဲက Profile တွေ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်..
ပြီးရင်တော့ ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း Import email addresses from Facebook ကို နှိပ်ပါ..ပေါ်လာတဲ့ Box ထဲမှာ Facebook Logo ကို Click တစ်ချက်ကျွေးလိုက်ပါ..Box တစ်ခု ထပ်ကျလာရင် Okay နှိပ်ပေးပါ..
ပြီးရင် ခဏလောက်စောင့်ပေးပါ.. Sync လုပ်နေတဲ့ အတွက် ခဏစောင့်ပါ.. Refresh လုပ်ပေးပါ.. ပြီးရင်တော့ ဘေးနားက Friend တစ်ယောက်ရဲ့ ပုံကို ထောက်ကြည့်ပါ..
သူ့ရဲ့ Profile ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်.. အဲ့ထဲမှာ Log-in mail ဆိုတဲ့ ဟာလည်း ပါတာပေ့ါ :)
Written By Einstein Kelvin
Kali Linux သွင်းပြီးပြီးခြင်းမှာ Sources list ကို အရင်ဆုံးပြင်ဆင်ခြင်း
Saturday, September 06, 2014 Admin
အရင် ဆုံး Kali Linux သွင်းပြီးပြီးခြင်းမှာ Sources list ကို အရင်ဆုံးပြင်ရမှာပေါ့နော် အဲလိုမှ မဟုတ်ရင် Error နည်းနည်းရှိနိုင်ပါတယ် အဲဒါလေးလုပ်ပြီးသွားရင်တော့ အဆင်ပြေသလောက်ရှိနေပါပြီ အဲဒါလေးဆိုတာကတော့ တခြားမဟုတ်ပါဘူး Sources list တွေကိုပဲပြောတာပါ အဲဒီ Sources List မပြင်ဘူးဆိုရင်တော့ နောက် Install လုပ်မယ့် application တွေက အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး အဲဒီအတွက်ကြောင့်ပါပဲဗျာ ။
# Original Repositories
# deb http://http.kali.org/kali kali main non-free contrib
# deb http://security.kali.org/kali-security kali/updates main contrib non-free
# Bleeding Edge Repositories
# ONLY USE THIS AT YOUR OWN RISK
# DO NOT USE IF NOT KNOWING WHAT YOU'RE DOING
# deb http://repo.kali.org/kali kali-bleeding-edge main
အပေါ်က Code တွေကို ကူးပြီးတော့ Terminal ထဲမှာတော့
ပြီးရင် ကူးထည့်ပေးလိုက်ပါ ဖျစ်နိုင်ရင် အကုန်ဖျက်ပြီး ကူးထည့်ပေးလိုက်ပါ အဲဒီ မူရင်း ပါတဲ့ နှစ်ကြောင်းကလဲ custom sources list မှာပါပြီးသားပါပဲဗျာ :) ပြီးရင်တော့
အဲဒါလေး အရင်လုပ်လိုက်ပါဦး မလုပ်သေးရင်လဲ လုပ်လို့ရတာလေးတွေကတော့ … Terminal ထဲမှာပေါ့နော်
[x] Myanmar Font Install ~ [x]
tar xvf zawgyi_keyboard-0.3.3.tar.gz && cd zawgyi && ./zawgyi_keyboard.py
select i and q
Re: Myanmar Kali Linux Organization
Largest Collection Of Google Dork For SQL Injection
Wednesday, September 03, 2014 Admin
(For Education Only)
စောင့်ရှောက်ရေး apk (မြန်မာမှုပြုထားသည်)
Monday, August 04, 2014 Admin
Twitter apk နဲ့ Twitter Account လုပ်နည်းလေးပါ
Saturday, August 02, 2014 Admin
ကျနော်နားလည်သလိုလုပ်ပြထားပါတယ် ပြုလုပ်ပုံတွေလိုလျှင်လဲလိုနိင်ပါတယ် ကျနော့်လိုမသိသေးသူများအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်
Android Phone အတွက် Root apkများစုစည်းမှု
Friday, August 01, 2014 Admin
✏ Vroot Apk v1.0.51
✏ Wandou root
✏ Root Master Apk v1.3.6
✏ Framaroot Apk v1.9.1
✏ Exynos Abusev.1.40.
✏ baidu root apk v2.3.4
✏ 360 root .
✏ King root AK v2.3.0
Credit to Moe Sat Tin Lay
All in One Update v 2.0
Thursday, July 24, 2014 Admin
All in One apk Update Version 2.0
Allin one apk ကို 24.7.2014 update တောင်းလို့လုပ်ပေးထားပါတယ် လိုချင်ရင်တော့ဒေါင်းလိုက်ပေါ့ဗျာ
PopAds.net နဲ.လွယ်လွယ်လေး ပိုက်ဆံရှာမယ် ( Lesson -5PopAds )
Friday, June 06, 2014 Admin
*မှတ်ချက်*ဒီ Scriptသုံးပြီးပိုက်ဆံရှာရန် သင်.မှာဘလော.တစ်ခုတော. ရှိဖို.လိုပါတယ်။ ဒီမှာ ဘလော.ခ်ရေးသားနည်းဖတ်ပြီး ဘလော.ခ်တစ်ခုလောက်အရင်ဖန်တီးလိုက်ပါ။
1. အရင်ဆုံး register လုပ်ဖို. အောက်က PopAds လင်.ခ်/ဓာတ်ပုံပေါ်ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
2.နှိပ်ပြီးတာနဲ. အောက်ကပုံအတိုင်း မြင်ရပါမယ်။
Account Details အကောင်.အသေးစိတ်
Username မှာ ကိုယ်ထည်.သုံးချင်တဲ. နာမည်ပေးလိုက်ပါ။
Email အီးမေးလ် ထည်.ပေးလိုက်ပါ။
Account Type အကောင်.အမျိုး အစားမှာ Publisher ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။
Password သင်ကြိုက်တဲ. စကားဝှက်ပေးလိုက်ပါ။
Confirm Pass ခုနက ပေးလိုက်တဲ. စကားဝှက်ကို နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရေးလိုက်ပါ။
Personal Details ကိုယ်ရေးအကျဉ်း
First Name နာမည်
Last Name မျိုးရိုးအမည် ထည်.ချင်ရာသာထည်.လိုက်ပါ။
Phone Number ဖုန်းနဲပါတ်ထည်.ရန်
I have read and accept Terms and Conditions ဒီစာကြောင်းရဲ. အရှေ.မှာ အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပြီး register ဆိုတဲ. စာလုံးပေါ်ထပ်နှိပ်လိုက်ပါ။
3. ပြီးရင် အောက်က ပုံအတိုင်း တွေ.ရပါမည်။ Please check your inbox for details on activating your account. ဆိုတော. ကိုယ်.ရဲ. အီးမေးလ်ထဲကို သွားပြီး activateလုပ်ဖို. သူကပြောပါတယ်။
4. ဒါကြောင်. အီးမေးလ်ဖွင်.လိုက်ပါ။ inboxထဲမှာ PopAds Notification ဆိုပြီး မေးလ်တစ်ခုကို တွေ.ရပါတယ်။ အဲ.ဒါကို ၀င်ကြည်.လိုက်ပါ။
5. သူပေးထားတဲ. လင်.ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင်အောက်ကပုံအတိုင်း activate လုပ်လို.ပြီးပါပြီဆိုတဲ. စာသားတက်လာပါတယ် ...
ဒါဆိုရင် PopAds နဲ. ဘယ်လိုပိုက်ဆံရှာရသလဲဆိုတာကို သိချင်သူများအတွက် https://www.popads.net/ ဒီလင်.ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
6. Member's Dashboard မှာ ကိုယ.်Username နဲ. Password ထည်.လိုက်ပြီး ၀င်ဖို. SIGN-IN ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
7. အရင်ဆုံး မိမိရဲ. ဘလော.ခ်လိပ်စာကို PopAds ဖြည်.ဖို. New Website ကို ရွေးလိုက်ပါ။
8. Site Name မှာ ကိုယ်.ဘလော.ခ်ရဲ. နာမည်ကို ရေးပေးပါ။
Site URL: မှာတော. ကိုယ်.ဘလော.ခ်ရဲ. လိပ်စာထည်.ပေးပါ
Description : ကိုယ.်ဘလော.ခ်ရဲ. အကြောင်းကို ရေးပေးပါ ။
Keywords: ကိုယ်.ဘလော.ခ်ကို ဂူးဂဲလ်ထဲမှာ ထည်.ရှာနိုင်တဲ. စကားလုံး/စကားစု ၃ခုကိုထည်.ပေးပါ။ ဘာလော.ခ်နာမည်ပြန်ရေးလိုက်လည်းရပါတယ်
Category: ဘလောခ.်က အားကစားအကြောင်.လား ဘာလား ရွေးထည်.လိုက်ပါ။
ပြီးရင် Add Website ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ တစ်ရက်လောင်.စောင်.ရပါတယ် ...မိမိဘလော.ခ်နာမည်ရဲ. နောက်မှာ Pendingအစား Approvedဖြစ်သွားပြီဆိုရင် ကိုယ်.ဘလော.ခ်ထဲမှာ popads ကြော်ငြာတွေထည်.ပြီး ပိုက်ဆံစရှာလို.ရပါပြီ။
9.Approvedဖြစ်ပြီးသားဘလော.ခ်စားရင်းတွေကို အောက်က ပုံအတိုင်းမြင်ရပါမယ်။
10. အခုဆိုရင် မိမိဘလော.ခ်ပေါ်ကြော်ငြာတွေပေါ်စေဖို. ကုတ်တွေယူဖို.လိုပါတယ်။ ကုတ်တွေယူဖို. Code Generator သွားလိုက်ပါ။Websiteမှာ မိမိဘလော.ခ်နာမည်ကိုရွေး။ ပြီးရင် Generate Codeကိုသာနှိပ်လိုက်ပါ။
11. အောက်ကပုံအတိုင်း ကုတ်တွေပေါ်လာပါတယ်။ အစိမ်းရောင်ကွင်းထားတဲ.codeတွေအားလုံးကို ကော်ပီကူးလိုက်ပါ။ြ
12.ပီးရင် ဘလော.ခ်ကာထဲမှာသွားထည်.ဖို. ဘလော.ခ်ကို sign in ၀င်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Template ကိုရွေး Edit HTML ကို နှိပ်။
13. ပြီးရင် ကုတ်တွေထဲမှာ ဘယ်နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် မောက်cursorချလိုက်ပါ။ Keyboardက Ctrl+F ကို ပူးတွဲတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ ညာဘက်ထောင်.ထိပ်နားက Search မှာ </head> လို.ရေးထည်.လိုက်ပြီး Enter တစ်ချက်ခေါက်လိုက်ပါ။ </head> ကို မြင်ရပြီဆိုရင် သူ.အပေါ်နားကပ်လျက်မှာ cursorချ ။ပြီးရင် ခုနက PopAds ကူးလာတဲ. ကုတ်တွေကို ပြန်ချဖို. keyboard က Ctrl+Vကိုသာနှိပ်လိုက်ပါ။ အောက်ကပုံအတိုင်း PopAds ကုတ်တွေကို </head>အပေါ်နားကပ်လျက်မှာ မြင်နေရပြီဆိုရင် အောင်မြင်သွားပါပြီ။ Save Template ကို နှိပ်။ View Blogကို နှိပ်။
တစုံတယောက်က မိမိဘလော.ခ်ပေါ်ကို တစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်တာနဲ. ကိုယ်က ပိုက်ဆံတွေ ရေလိုရလာမှာ မုချ ကေန်ပါပဲလို. ရေးရင်း နိကုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။
14.ပိုက်ဆံရတာတော.ဟုတ်ပြီ ပိုက်ဆံထုတ်နည်းတောင်မပြောရသေးပဲနဲ. ခနလောက်ဆက်ဖတ်လိုက်ပါဦးနော်။
Account Managerကိုသွားပြီး Billing ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ပိုက်ဆံထုတ်ဖို. Withdrawကို နှိပ်လိုက်ပါ။
15. ပြီးရင် paypal , bank transferပဲဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေတဲ.နည်းလမ်းကိုရွေးလိုက်ပါ။ များသောအားဖြင်.တော. paypalကိုပဲ သုံးကြပါတယ်။ အဲ. တစ်ခုသတိထားရမှာကတော. မိမိပိုက်ဆံက minimum ၅ဒေါ်လာရှိမှ ထုတ်နိုင်မှာပါ။ တချို.သူတွေကတော. တစ်နေ.ကို ဒေါ်လာ ၂၀ ထိတောင် ရှာနိုင်ပါတယ်။
( Payment Proof - တကယ်လုပ်တကယ်ရတဲ. သက်သေအထောက်အထားလေးတွေပါ )
Credit to Earn Online Money Easily
Tuesday, June 03, 2014 Admin
Predators Game for Android (83.44 MB)
Sunday, June 01, 2014 Admin
Preadtors ဂျိုသား Game ​လေးပါ။Playstore မှာ $ 32.15 ​ပေးရမှာဖြစ်​ပါတယ်​။​
Free ရ​အောင်​လုပ်​​ပေးထားပါတယ်​။ကစားချင်​တဲ့ Gamer များ​download လုပ်​ကစားနိုင်​ပါတယ်​။
zip file ဖြေပြီး Filemanager>>>Internal>>>Android>>>>
Data>>>Obb ထဲထည့်​လိုက်​ပါ။ apk ကို install လုပ်​ကစားနိုင်​ပါပြီ။
Download Link 1>>>>
Download Link 2>>> Download
Godzilla Game For Android (154.99 MB)
​ဂေါ်ဇီလာရုပ်​ရှင်​ကား Game ပါ အသစ်​ထွက်​တာ ၁၉ ရက်​​ကျော်​ပဲရှိပါ​သေးတယ်​။
Link 1 >>>>Download
Link 2>>>> www78.zippyshare.com/v/68992721/file.html
Thursday, May 22, 2014 Admin
Ref & Edited From – Super Ko Kyaw Blog
အရင်ဆုံး Y535 ကို Root ရအောင် ဖန်တီးခဲ့သော Developer DuWon Mobile က နိုင်လင်း ကိုလည်း Credit ပေးပါတယ် ……
Font ကတော့ Font Developer ကိုကျော်စွာသွင် Font ကို သုံးထားပါတယ်…..
Keyboard ကတော့ ကိုဟန်ဇော်ဦး ရဲ့keyboard ကိုသုံးထားပါတယ်
ဒီ Tool ကိုမူရင်းပေါင်းစပ်ဖန်တီးသူကတော့ စူပါကိုကျော်ဖြစ်ပါတယ်….
ကျနော်ကတတ်သလောက်မှတ်လောက်နဲ့ပြန်ပြင်ရေးထားတာမို့ အမှားပါရင်လည်းခွင့်လွှတ်ပါလို့ ……..
ဒီ Tool လေးကိုပြန်လည်ဖန်တီးနိုင်အောင်ညွှန်ကြားပေးတာကတော့MMSDကကိုဖြိုးချမ်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ…
သက်ဆိုင်သူအားလုံးကိုကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်…။ Credit လည်းပေးပါတယ်..။
အသုံးပြုနည်းကတော့ phone ကို Usb debugging & Unkown Sources ရယ်ကို on ပြီးတော့ ….
PC နဲ့ချိတ် Y535 Root Myanmar Font.bat ဖိုင် လေးကို run ပြီး Enter ခေါက် ပေးလိုက်ယုံပါဘဲ……
ပထမ reboot တခါကျပါလိမ့်မယ် ….
reboot တက်လာတဲ့အထိ Phone ကိုကြိုးမဖြုတ်ဘဲစောင့်ပေးပါ သူ့ဘာသူအလုပ်လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်
ခဏထပ်စောင့်လိုက်ပါ reboot ကျပြီး တက်လာလျှင် အဆင်ပြေသွားပါပြီ………….
ဒီ Tool ကိုသုံးတဲ့အခါမှာ ADB Error တက်တတ်ပါတယ်….
ဒါ့ကြောင့် ADB Error ရှင်းဖို့အတွက် ကိုစိုးထွန်းဦး ဖန်တီးထားတဲ့ ADB Cleaner နဲ့သာဆော်လိုက်ရတယ်
ADB Cleaner By Soe Htun Oo Download Here
အရင်ဆုံး Y535 ကို Root ရအောင် ဖန်တီးခဲ့သော Developer DuWon Mobile က နိုင်လင်း ကိုလည်း Credit ပေးပါတယ် ……Font ကတော့ Font Developer ကိုကျော်စွာသွင် Font ကို သုံးထားပါတယ်…..Keyboard ကတော့ ကိုဟန်ဇော်ဦး ရဲ့keyboard ကိုသုံးထားပါတယ်ဒီ Tool ကိုမူရင်းပေါင်းစပ်ဖန်တီးသူကတော့ စူပါကိုကျော်ဖြစ်ပါတယ်….ကျနော်ကတတ်သလောက်မှတ်လောက်နဲ့ပြန်ပြင်ရေးထားတာမို့ အမှားပါရင်လည်းခွင့်လွှတ်ပါလို့ …….. ဒီ Tool လေးကိုပြန်လည်ဖန်တီးနိုင်အောင်ညွှန်ကြားပေးတာကတော့MMSDကကိုဖြိုးချမ်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ…သက်ဆိုင်သူအားလုံးကိုကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်…။ Credit လည်းပေးပါတယ်..။
အသုံးပြုနည်းကတော့ phone ကို Usb debugging & Unkown Sources ရယ်ကို on ပြီးတော့ ….PC နဲ့ချိတ် Y535 Root Myanmar Font.bat ဖိုင် လေးကို run ပြီး Enter ခေါက် ပေးလိုက်ယုံပါဘဲ……ပထမ reboot တခါကျပါလိမ့်မယ် …. reboot တက်လာတဲ့အထိ Phone ကိုကြိုးမဖြုတ်ဘဲစောင့်ပေးပါ သူ့ဘာသူအလုပ်လုပ်သွားပါလိမ့်မယ် ခဏထပ်စောင့်လိုက်ပါ reboot ကျပြီး တက်လာလျှင် အဆင်ပြေသွားပါပြီ…………. အဆင်ပြေကြပါစေ …….ဒီ Tool ကိုသုံးတဲ့အခါမှာ ADB Error တက်တတ်ပါတယ်….ဒါ့ကြောင့် ADB Error ရှင်းဖို့အတွက် ကိုစိုးထွန်းဦး ဖန်တီးထားတဲ့ ADB Cleaner နဲ့သာဆော်လိုက်ရတယ်
DownloadADB Cleaner By Soe Htun Oo Download Here
ECCD Project Officer - *Plan International Myanmar* *Job Advertisement for ECCD Project Officer* *(Early childhood care and development and enterprise development)* Plan...
ဖမျးဆီးထိနျးသိမျးခံ ဒေါငျးမြိုးဆကျ အဖှဲ့ဝငျကို သိနျးတရာတနျ နှဈယောကျ အာမခံပေးလို့ ပွနျလှတျလာ
အာဆင်နယ် သမိုင်းတလျှောက် ပွဲ ၅၀ အတွင်း နိုင်ပွဲအများဆုံးနည်းပြအဖြစ် အမ်မရီ စံချိန်တင်